ကွန်ပျူတာ - Gadget သတင်းများ သတင်းများ (စာမျက်နှာ ၂)
၀ င်းဒိုး ၇ အတွက်ထောက်ခံမှုအဆုံးသတ်ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
Microsoft သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Windows ၏အကျော်ကြားဆုံးဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Windows7ကိုနှုတ်ဆက်သည်။
Chrome အတွက်အကောင်းဆုံး extension များ
သင်၏ Mac တွင် InfoSearch malware ရှိပါသလား။ ဒါနဲ့ငါကဖယ်ရှားပစ်နိုင်ခဲ့သည်
သင်၏ Mac တွင်မကောင်းသောအတွေ့အကြုံများခံစားခဲ့ရပါက Malwarebytes မှတစ်ဆင့်သင့်ကွန်ပျူတာအားအာမခံချက်များအားလုံးဖြင့်“ သန့်ရှင်း” စေရန်သင့်အားယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါသည်။
ဂျီမေးလ်အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုရှိကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသောအီးမေးလ်များကိုတဆင့်ပို့ခြင်းသည် Multi Email Forward application အတွက်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်
Pixel 4, Pixel Buds နှင့် Pixelbook Go တို့သည်ဂူဂဲလ်အသစ်တင်လိုက်သောအသစ်အဆန်းများဖြစ်သည်
Google ၏ Pixel အမျိုးအစားကိုစတုတ္ထမျိုးဆက်တရားဝင်ဖွင့်ပြခဲ့သည်။ အဓိကအသစ်အဆန်းကိုကိုယ်ဟန်အမူအရာစစ်ဆင်ရေးတွင်တွေ့ရသည်။
MacOS Catalina ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ ဘာအသစ်လဲ၊ ဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲ
macOS Catalina ကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန် update လုပ်ချင်ရင်အောက်ပါနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။ တစ်ခုကအစာရှောင်ခြင်းနှင့်နောက်တစ်ခုနှေးခြင်း
LG ကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသူများအတွက် Monitors အသစ် ၃ ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုနှစ်သက်သောသုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့်မော်နီတာအသစ်သုံးခုကိုတင်ဆက်လိုက်သည်
Asus ROG Strix G531, ဂိမ်းကစားသူအများစုအတွက်လက်တော့ပ်တစ်ခု၊
ASUS နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ပူးပေါင်းမှုတွင် ROG Strix G531 သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည့် gamer laptop တစ်လုံးဖြစ်သည်။
devolo WiFi အဆောက်အ ဦး - ပြင်ပတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်
ယခုကျွန်ုပ်တို့တရားဝင် ၀ ယ်ယူနိုင်သောပြင်ပတွင်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့် devolo WiFi အဆောက်အ ဦး အပြင် WiFi adapter အကြောင်းအားလုံးလေ့လာပါ။
IFA 2019 တွင်တရား ၀ င်ပြသထားသည့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက်အမှတ်တံဆိပ်၏အသစ်စက်စက်မိသားစု Acer ConceptD အကွာအဝေးကိုလေ့လာပါ။
IFA5တွင်တရားဝင်တင်သွင်းထားသောတံဆိပ်ပေါ့ပါးသည့် notebook အသစ်များဖြစ်သော Acer Swift3နှင့် Swift 2019 အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
IFA 300 မှာတရား ၀ င်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့ Predator Triton 2019 Acer ဆီကပေါ့ပါးတဲ့ပေါ့ပါးတဲ့ဂိမ်းလက်တော့ပ်အသစ်အကြောင်းပါ။
IFA 2019 တွင် Acer သည်၎င်း၏ Chromebook notebooks အသစ်များကိုပြသခဲ့သည်
IFA 2019 မှာတရား ၀ င်တင်ဆက်ထားပြီး Acer Chromebook လက်တော့ပ်တွေအကုန်လုံးကိုရှာကြည့်ပါ။
Samsung Galaxy Book S: အမှတ်တံဆိပ်၏ laptop အသစ်
Galaxy Book S ၏ Samsung Laptop သစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏တင်ပြချက်တွင်တရားဝင်တင်ပြခဲ့သည်။
ပြင်ပ hard drive ကို format လုပ်နည်း
သင်၏ Windows, Mac သို့မဟုတ် Linux ကွန်ပျူတာမှပြင်ပ hard drive ကို format ချသည့်အခါသင်အသုံးပြုနိုင်သည့်နည်းလမ်းအားလုံးကိုရှာဖွေပါ။
အသစ်နှင့် Logitech G502 Lightspeed ၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ
Logitech ကြိုးမဲ့မောက်စ်ကိုကစားသမားအများစုအတွက်စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ G502 Lightspeed အသစ်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်
Logitech သည်၎င်း၏ G502 Lightspeed ကြိုးမဲ့ mouse ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Logitech သည် G502 Lightspeed အသစ်ကိုဘာလင်မြို့၌တင်ပြခဲ့သည်။ ဒီကစားစရာမောက်စ်သည်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်သည်
ASUS သည် ၁၃၊ ၁၄ နှင့် ၁၅ လက်မ ZenBook အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ASUS ကုမ္ပဏီသည်အရွယ်အစား ၁၃၊ ၁၄ နှင့် ၁၅ လက်မအရွယ်အစားရှိသည့် ZenBook လိုင်းတွင်လက်တော့ပ်အသစ်များကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ဤအသင်းသစ်များသည်သူတို့၏မျက်နှာပြင်ကိုအံ့အားသင့်စေကြသည်
Trust GXT 248 Luno သည် Trust Gaming မှဂိမ်းကစားသူများအတွက် microphone အသစ်ဖြစ်သည်
Wacom သည် Cintiq 16 အသစ်ကို Las Vegas ရှိ CES တွင်ဖွင့်သည်။ ၎င်းသည် Pro Pen2ပါ ၀ င်သောကျောင်းသားများအတွက်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
NVIDIA GeForce RTX 900 တပ်ဆင်ထားသော Acer သည် Predator မှတ်စုစာအုပ်သစ်များကို Triton 500 နှင့် 2080 တို့ဖြင့်တင်ပြခဲ့သည်။
၀ င်းဒိုးကွန်ပျူတာ (သို့) hard disk drive ကိုအလွယ်တကူနဲ့အလျင်အမြန် format လုပ်ရန်လက်ရှိရရှိနိုင်သောနည်းလမ်းများအားလုံးကိုရှာဖွေပါ
Keyboard သည်ကီးဘုတ်တစ်ခုထက်ပိုပြီးဖြစ်လာသည့်အခါ၎င်းသည် Logitech Craft ဖြစ်လာသည်
ဘယ်အချိန်မှာမဆို keyboard တစ်ခုထက်ပိုပြီးဖြစ်လာတဲ့အခါ။ Logitech Craft သည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါသောကီးဘုတ်ဖြစ်သည်
အားလုံးသော operating system အားလုံးသည်၎င်းတို့သည်မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်၊ console ပေါ်တွင်၊ smart TV ပေါ်တွင်ရှိမရှိ ...
Firefox ၏ extensions အဟောင်းများတွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ရှိပြီးဖြစ်သည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Mozilla Foundation browser ကိုအကြီးအကျယ်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သော Firefox Quantum ကိုစတင်ဖြန့်ချီခဲ့သည်
Logitech သည်၎င်း၏ကြိုးမဲ့ကစားနည်းအသစ်ဖြစ်သော Logitech G PRO ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်
ဂိမ်းချစ်သူများသည် Logitech ထုတ်ကုန်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသိပြီးဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်, လက်မှတ်ရုံ ...
HP သည်စပိန်နိုင်ငံတွင် PC ရောင်းချမှုတွင် ဦး ဆောင်သူဖြစ်သည်
HP သည်စပိန်နိုင်ငံရှိကွန်ပျူတာများ၏ရောင်းအားကို ဦး ဆောင်သည်။ စပိန်နိုင်ငံတွင်ယခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်အတွင်းကွန်ပျူတာရောင်းချမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Windows 10 မှာ taskbar icon တွေကိုဘယ်လိုပိုကြီးအောင်လုပ်မလဲ
Windows ဗားရှင်းများပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ taskbar သည်ပိုမိုကြီးမားသောအခန်းကဏ္ on မှပါဝင်သည်။ Windows 10 တွင် taskbar ရှိ icon များသည်သင့်အတွက်အလွန်သေးလွန်းနေရုံမျှမက၊ ၎င်းတို့အားလျှင်မြန်အောင်မည်သို့လုပ်နိုင်သည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။
Windows 10 အသုံးပြုသူအကောင့်များအကြားမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
အလုပ်ခွင်၌ဖြစ်စေ၊ အိမ်တွင်ဖြစ်စေလူအများအသုံးပြုသောကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုသောအခါ၎င်းကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး စီ၊ ဝင်းဒိုးဗားရှင်းအသစ်တိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသောမတူညီသောသုံးစွဲသူအကောင့်များအကြားပြောင်းလဲရန်နည်းလမ်းသစ်များကိုကမ်းလှမ်းရန်အမြဲတမ်းအကြံပြုသည်။ အဖွဲ့ထဲမှာ။
Windows 10 ကိုဘယ်လိုအခမဲ့ install လုပ်မလဲ
သင်၌တရားဝင်လိုင်စင်မရှိသောကြောင့် Windows 10 ကိုစမ်းသပ်ရန်မဆုံးဖြတ်ရသေးပါကဤဆောင်းပါးတွင်၎င်းကိုသင်မည်သို့အခမဲ့နှင့်တရားဝင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်ကိုပြပါလိမ့်မည်။
ပုံများကို Windows ဖြင့်ပုံပြောင်းရန် ၁၀
ပုံတစ်ပုံအား PDF ဖိုင်တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်မျှသာကြာလိမ့်မည်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင့်ကိုပြတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် WPA2 ကွန်ယက်များတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောလုံခြုံရေးကင်းမဲ့မှုကြောင့် Google သည် WPS ဆက်သွယ်မှုများအတွက်ထောက်ပံ့မှုကိုဖျက်သိမ်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
Windows 10 ကိုဘယ်လိုပိုမြန်အောင်လုပ်မလဲ
လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်က Windows ကိုစတင်မိတ်ဆက်စဉ် မှစ၍ သုံးစွဲသူများစွာသည်နောက်ဆုံးပေါ် ...
အပူနှင့်အတူအရောင်းလည်းရောက်လာခြင်းနှင့် Steam ဂိမ်းများစွာကိုအထူးလျှော့စျေးနှင့်အတူဤအရေးကြီးသောရက်ချိန်းလွဲချော်နိုင်ဘူး။
Xiaomi သည်စပိန်တွင် Mi Laptop Air 13,3 "ကိုတရားဝင်လွှတ်တင်
Xiaomi လက်ပ်တော့ပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသို့တရားဝင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီသည် Mi Laptop Air ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ElRubius သည်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသူ ၇၀၀,၀၀၀ ထက်ကျော်လွန်သော youtubers ၁၀၀ နှင့်အတူ Fortnite ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုစီစဉ်ခဲ့သည်
ElRubius သည်ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် youtuber ၁၀၀ နှင့်အခြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများနှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ရင်ဆိုင်ရသည့်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။
Wacom သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်သော ၂၄ လက်မအရွယ် Cintiq Pro ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာများနှင့်အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက် Wacom Intuos တို့ကိုတင်ပြသည်။
ဤတိုးချဲ့မှုများနှင့် Netflix ကိုအများဆုံးရယူပါ
သင့်ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ကွန်ပျူတာရှိပြီးသင်၏ Netflix အကောင့်မှအကျိုးအပြည့်အဝရယူလိုပါက Chrome အတွက်အကောင်းဆုံး extension များဒီမှာပါ။
Sanhok, PC အတွက် PUBG မြေပုံအသစ်ကိုဇွန် ၂၂ ရက်တွင်ရနိုင်သည်
ဇွန် ၂၂ ရက်မှစ၍ PUBG PC သုံးစွဲသူများသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူမြေပုံငယ်ဖြစ်သော Sanhok မြေပုံအသစ်ကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဝဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများမှ Android သတင်းစကားများကိုယခုရရှိနိုင်သည်
Android messaging application သည် web မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာခုံများသို့လမ်းလျှောက်သွားသည်
Android emulator Andy သည် cryptocurrency ဆော့ဖ်ဝဲကိုသူတပ်ဆင်နေသည့်ကွန်ပျူတာအားလုံးပေါ်တွင် install လုပ်နေသော်လည်း developer ကငြင်းဆိုသည်။
လာမည့်နှစ်တွင် Windows XP နှင့် Vista ကွန်ပျူတာများအတွက်ထောက်ပံ့မှုများကိုရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဖြစ်သည်
Steam ဗီဒီယိုဂိမ်းပလက်ဖောင်းသည် Windows XP နှင့် Windows Vista အပါအ ၀ င် Windows ဟောင်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်
Chrome Web Store ပြင်ပမှ extension များကိုတပ်ဆင်ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ
Extensions များသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း browser များရရှိခဲ့သည့်အကောင်းဆုံးတီထွင်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ခန့်မှန်းရရင် Apple က USB-C ကိုနောက်မျိုးဆက် iPhone မှာလောင်းမယ်
နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများကိုတက်ရောက်ခြင်းကနောက်ဆုံးတွင် Apple သည်လာမည့် iPhone နှင့် iPad တို့တွင်လျှပ်စီးပြတ်လပ်မှုမရှိပဲလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟုအရာအားလုံးကဖော်ပြသည်။
AMD သည် Intel ၏ကြွက်သားများအားဒုတိယမျိုးဆက် Threadripper နှင့် 32 cores ဖြင့်တုန့်ပြန်သည်
မနေ့က အကယ်၍ Intel သည် ၂၈-core ပရိုဆက်ဆာအသစ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့လျှင်ယနေ့ AMD သည်၎င်း၏မျိုးဆက်သစ် Threadripper ပရိုဆက်ဆာများ၊ cores ၃၂ ခုနှင့်ချည် ၆၄ ခုရှိသည်။
MacOS Mojave ဟာ 32-bit application တွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့နောက်ဆုံး version ဖြစ်တယ်
MacOS Mojave သည် 32 bit အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော application များနှင့်လိုက်ဖက်ညီသောနောက်ဆုံးပေါ် version ဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ Mac App Store တွင်အသုံးပြုသူများအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လိုလျှင်၎င်းတို့ကိုအသစ်ပြောင်းရလိမ့်မည်။
Intel သည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသော 28-core, 56-thread 5Ghz ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူကြွက်သားဆွဲထုတ်
Computex 2018 ပွဲအခမ်းအနားကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး Intel က 28-core processor အသစ်တစ်ပြိုင်နက်တည်း Thread ၅၆ ခုနှင့်တာဘို mode တွင်ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည့် 56GHz အမြန်နှုန်းရရှိနိုင်ရန်စွမ်းဆောင်ရည်သစ်ကိုတင်ဆက်ပြသခဲ့သည်။
Sharp သည် Toshiba ၏ PC ဌာနကို ၀ ယ်သည်
Sharp သည် Toshiba ၏ကွန်ပျူတာဌာနကိုတရားဝင် ၀ ယ်သည်။ ကွန်ပျူတာ၏အစိတ်အပိုင်းသို့ Sharp သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသည့်ဤစစ်ဆင်ရေးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
macOS Mojave အတွက်သတင်းအားလုံး
ဤနေရာတွင် Mojave အဖြစ်နှစ်ခြင်းခံသည့်နောက် macOS ၏လက်မှလာမည့်သတင်းအားလုံးကိုသင့်အားပြပါမည်။
Arm သည်၎င်း၏ ၇ နာနိုမီတာချစ်ပ်များကိုအဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းများအတွက်သီးသန့်တင်ဆက်သည်
Arm သည်မီဒီယာကိုနောက်ဆုံးတင်ဆက်မှုတွင် ၇ နာနိုမီတာနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်သောချစ်ပ်အသစ်သုံးမျိုးကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။
Microsoft က Windows 10 မှာဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးမလိုပါဘူး
AVTEST စမ်းသပ်မှုများက Windows Defender သည်ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး antivirus ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ကြောင်းမည်သို့အတည်ပြုသည်ကိုတွေ့ပြီးနောက်ကုမ္ပဏီသည်၎င်းကို၎င်း၏ဘလော့ဂ်မှတဆင့်ပြသသည်။
Acer Predator သည် X27: 4K, HDR နှင့် G-Sync ကိုဒေါ်လာ ၁,၉၉၉ ဖြင့်သာပေးသည်
Devolo သည် dLAN 1000 mini၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော PLC ဖြစ်သည်
ဂျာမန်ထုတ်လုပ်သူ devolo သည် dLAN PLCs ကိုလျှော့ချထားသောဗားရှင်းကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်၌ Wi-Fi အချက်ပြမှုများကိုပြproblemsနာမရှိဘဲမြန်ဆန်စွာမြန်ဆန်စွာတိုးချဲ့နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ရဲ့သင့်ဖုန်းကငါတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းကို PC ကနေထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်
Seattle တွင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Build 2018 ၏ပထမဆုံးနေ့၊ Microsoft စီစဉ်သောနေ့များကိုမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အချို့သောသတင်းများအရ Facebook သည်အတုဥာဏ်ရည်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်ချစ်ပ်အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ဌာနတစ်ခုလုံးကိုတည်ထောင်နေသည်။
GXT 590 Bosi ဘလူးတုသ်သည်ယုံကြည်မှု၏ Android နှင့် Windows အတွက်ဂိမ်းကစားသူအသစ်ဖြစ်သည်
ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်လုပ်သူ GXT 590 Bosi Bluetooth သည် Android နှင့် Windows မှစီမံသောမည်သည့်စက်ပစ္စည်းအတွက်မဆိုအဝေးထိန်းခလုတ်ဖြစ်သည်။
AOC သည် AMD Radeon FreeSync2နှင့် VESA DisplayHDR 400 နှင့်ပထမဆုံး Monitor ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
AOC ကုမ္ပဏီသည်ပထမဆုံးသော Monitor ကို AMD Radeon FreeSync2နှင့် VESA DisplayHDR 400 တို့ဖြင့် ၃၁.၅ လက်မဖန်သားပြင်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး 31.5 Hz ၏ Refresh Rate ကိုပြသလိုက်သည်။
အကောင်းဆုံးစကားဝှက်မန်နေဂျာကိုရှာဖွေနေပါသလား။ သင်၏စကားဝှက်များကိုကိရိယာများအကြားလုံခြုံစွာနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံး ၅ ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
Apple က Mac Pro ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာဈေးကွက်တင်မယ်ဆိုတာအတည်ပြုခဲ့တယ်
Cupertino မှယောက်ျားများသည် TechCrunch သို့တရားဝင်အတည်ပြုပြီးပါကလာမည့်နှစ်တွင် Mac Pro ကိုတရားဝင်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။
Philips သည် ၂၇ လက်မအရွယ် QHD မော်နီတာအသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Phillips ကုမ္ပဏီသည် ၂၇ လက်မ resolution နှင့်အလွန်ထူးကဲသော ergonomics ရှိသောလူအများစုအတွက် QHD resolution ဖြင့်မော်နီတာအသစ်တစ်ခုကိုတင်ပြခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာကျိုးနေခြင်းကြောင့်ဒေါ်လာသန်း ၄၀၀ နီးပါးကိုရွှေတွင်းသို့ကျစေခဲ့သည်
ပြုပြင်မွမ်းမံမှုသုညကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း၏ကွန်ပျူတာများတွင်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ရွှေ၊ ရတနာများနှင့်ပလက်တီနမ်များပါ ၀ င်သည့်လေယာဉ်သည်ရုရှားကိုဖြတ်ကျော်စဉ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အားလုံးကုန်ဆုံးနေသည်။
Nimbus ကုမ္ပဏီသည်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းပမာဏ ၁၀၀ အထိအထိသိုလှောင်နိုင်သည့်ပထမဆုံး SSD ကိုတင်ပြခဲ့သည်
Toshiba သည်စီးပွားရေးကဏ္ on အပေါ် ဆက်လက်၍ လောင်းနေသည်။ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတီထွင်မှုကို Toshiba dynaEdge လို့ခေါ်တယ်။ သူက Windows 10 အိတ်ဆောင်ကွန်ပျူတာနှင့်စမတ်မျက်မှန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
New Raspberry Pi3Model B +: ပိုမိုမြန်သောအမြန်နှုန်းနှင့်5GHz Wi-Fi
မျိုးဆက်သစ် Raspberry Pi ကိုယခုအခါ ၀ ိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်ပရိုဆက်ဆာမြန်နှုန်းတို့တိုးတက်လာသည်။
EVO Silent Wireless၊ ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်သော့များဖြင့်မောက်စ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါ
ညဥ့်နက်တဲ့အချိန်မှာစာရိုက်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်လား။ သင်ဆူညံသံတွေအများကြီးလုပ်တာသင်တိုင်ကြားပြီးပြီလား။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော EVO Silent Wireless သည်သင်ပြီးပြည့်စုံသော package တစ်ခုဖြစ်သည်
ASUS သည် ၃၂ လက်မအရွယ် IPS 4K UHD ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မော်နီတာအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ASUS သည် ၄ ​​င်း၏ထုတ်ကုန်များအတွက်နည်းပညာကဏ္ in တွင်အသိအမှတ်ပြုထားသောကုမ္ပဏီများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် Windows 10 ကိုအခမဲ့ခွင့်ပြုသည်
သင်၏ Windows 10 အားအခမဲ့ကူးပြောင်းလိုပါကယနေ့ခေတ်တွင်ယူရိုငွေတစ်လုံးတည်းသုံးစွဲစရာမလိုဘဲထပ်မံပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
ဒုတိယမျိုးဆက်အသစ် AMD Ryzen ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များပေါက်ကြားနေသည်
AMD ပရိုဆက်ဆာအသစ်များ၏ပထမဆုံးဒေတာနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အထူးသဖြင့် Ryzen မျိုးဆက်သစ်များမှထွက်ပေါ်လာမည့်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုအပ်ပါ။
Philips သည် IPS နှင့် FreeSync မော်နီတာများစွာကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်လွှတ်တင်သည်
IPS panel များနှင့် FreeSync တို့ပါ ၀ င်သောထိုမော်ဒယ်များသည်ယူရို ၁၈၉ ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသည်။ E189 range အသစ်ဟုလူသိများလိမ့်မည်။
HP သည် HP EliteBook 800 Series အသစ်ဖြစ်သော notebooks, dock သစ်နှင့် 4K display အသစ်ကိုတင်ပြသည်
HP EliteBook 800 ၏လိုင်းသစ်ကိုကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရကမ္ဘာ့အပါးလွှာဆုံးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောစခန်းများအဖြစ် ...
Ultimate Performance: စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ Windows 10 မှာ Power mode
Ultimate Performance - စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ Windows 10 မှာ Power mode ။ operating system သို့လာသည့် power mode အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဇူလိုင်လမှ စ၍ လုံခြုံမှုမရှိသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်သောအခါ Chrome browser သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်
ဇွန်လမှစတင်၍ ဂူဂဲလ်၏ browser Chrome သည်လုံခြုံမှုမရှိသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်သောအခါအသုံးပြုသူများကိုစတင်သတင်းပို့လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အင်တာနက်ပေါ်မှပို့သောအခါဒေတာကိုစာဝှက်မထားပါ။
သင်၏ကီးဘုတ်ဟောင်းကိုစက်မှုလယ်ယာကီးဘုတ်အတွက်အသစ်ပြန်လည်ရန်စဉ်းစားနေပါက၊ သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုပထမ ဦး စွာသင်သိသင့်သည်။ စက်မှုကီးဘုတ်ကဘာတွေပေးသလဲ၊ ဘယ်လောက်ကုန်ကျတယ်၊ ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးမော်ဒယ်တွေလဲဆိုတာကိုသင့်အားပြောပြပါမယ်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ Windows 10 S ကို ၈ လအကြာတွင်ဖြိုခွဲခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Redmond ကုမ္ပဏီကြီးသည်အထူးဂရုပြုရန်ဆွဲဆောင်သည့်အလောင်းအစားတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးပေါ် Flash အားနည်းချက်သည် platform အားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်
Flash နည်းပညာသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များပထမဆယ်စုနှစ်တွင်အလွန်ဖက်ရှင်ကျခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုများပြုလုပ်နေသောသန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများအတွက်အထူးလုံခြုံရေးပြcontinuesနာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
Samsung က cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက်ဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်လုပ်ခြင်းစတင်ခဲ့သည်
Samsung သည် cryptocurrencies သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက်ချစ်ပ်များကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဒီစျေးကွက်ထဲကို ၀ င်ဖို့ကိုရီးယားကုမ္ပဏီရဲ့အစီအစဉ်တွေအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Windows နဲ့ Mac မှာအလိုအလျောက် shutdown ချဖို့ဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ PC သို့မဟုတ် Mac လည်ပတ်မှုအတွက်လိုအပ်သည်ထက်ပိုပြီးအချိန်မဖြုန်းပါကကျွန်ုပ်တို့အလိုအလျောက်ရပ်တန့်ရန် Windows သို့မဟုတ် Mac ပေါ်တွင်ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ သင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်သိပါသလား။ သင်အလိုရှိသည့်အချိန်တွင်သင့်ကွန်ပျူတာကိုအလိုလျောက်ပိတ်ပစ်ရန်နည်းလမ်းများစွာကိုသင်ကြားပေးသည်။
operating system အားလုံးတွင် screenshots များမည်သို့ယူရမည်ကိုသင့်အားသင်ကြားပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းစက်သို့မဟုတ် desktop မျက်နှာပြင်ကိုရိုက်ယူခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ screenshots တွေဘယ်လိုလုပ်သလဲသိလား။ ကျနော်တို့ဒီမှာရှင်းပြ!
SSD drives တွေကိုတော်လှန်ရန် Intel ၏စိတ်ကူးဖြစ်သော QLC ချစ်ပ်များကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါ
QLC ဟုခေါ်သောနည်းပညာအသစ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် Intel သည် SSD hard drive များကိုကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည်ဟူသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှတ်ချက်ပေးသောကောလာဟလများအားလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြောလိမ့်မည်။
ဂိမ်းကစားသည့်ကြွက်သစ်: Razer Mamba HyperFlux
AKG သည် N5005၊ နားကြပ်အသစ်နားကြပ်အသစ်ကိုပေးသည်
AKG ကုမ္ပဏီသည်ဂီတချစ်သူများအတွက်ရည်ရွယ်သည့် AKG N5005 နားကြပ်အသစ်များကို CES တွင်တင်ပြခဲ့ပြီးမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။
ဒီစာရင်းထဲမှာ Spectre နဲ့ Meltdown တို့ရဲ့ Processor ကိုထိခိုက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ
ထုတ်လုပ်သူ၏ပရိုဆက်ဆာများအားလုံးတွင်တွေ့ရှိရသောအရေးကြီးပြီးလေးနက်သောအားနည်းချက်ကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိသည့်ပရိုဆက်ဆာများအားလုံးကို Intel က၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
SORTEO ဖြင့် Ergonomics mouse Trust Vergo ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
Trust Vergo တွင်ရှိသောအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောမည့်နေရာ၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသော ergonomic bluetooth mouse ဖြစ်သည်။
NewSkill မှ Nix နားကြပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်
Newskill ၏ Nix bluetooth gamers နားကြပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါသည်၊ သို့သော် ၄ င်းတို့၏ဘက်စုံသုံးနိုင်မှုကြောင့်မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး DRAM Chip ကို Samsung ကကြေငြာလိုက်သည်
Samsung မှကြေငြာချက်အရကုမ္ပဏီ၏ 2018-nanometer ဖြစ်စဉ်မှပြုလုပ်ထားသော DDR4 RAM ချစ်ပ်အသစ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Seagate တွင် HDD hard drive များ၏အမြန်နှုန်းကိုနှစ်ဆတိုးရန်အတွက်လိုအပ်သောနည်းပညာရှိပြီးဖြစ်သည်
Seagate အင်ဂျင်နီယာများသည် HDD hard drive များ၏မြန်နှုန်းကိုနှစ်ဆတိုးနိုင်သည့်နည်းပညာတစ်ခုကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။
LG Gaming Monitor အသစ်သည် 240Hz Refresh Rate နှင့်အတူ
LG ၏နောက်ဆုံးပေါ်မော်နီတာသည် ၂၇ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်ယူအက်စ် ၅၀၀ ကျော်အတွက် 27 Hz Refresh Rate ကိုပြသသည်။
အော်ပရာ 50 သည် cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်အတူဇာတိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်
အခြားသူများ၏မိတ်ဆွေများကိုအချို့သောသူများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအသုံးမပြုခြင်းကိုတားဆီးရန်အတွက် Opera သည်နောက်ထပ် version တွင် cryptocurrency lock ကိုမူလအတိုင်းစတင်လိမ့်မည်။
Ockel Sirius A Pro၊ ဒီအိတ်ဆောင် miniPC အတွက်စွမ်းအင်ပိုသည်
သင်၏ pants အိတ်ကပ်ထဲ၌ Windows 10 ကွန်ပျူတာလိုအပ်ပါသလား။ Ockel Sirius A Pro သည်သင်၏ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်
နောက်ထပ် Chrome ၏ update ကကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသည့်ဝဘ်တွင်ဗီဒီယိုအလိုအလျောက်ပြန်ထုတ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
iMac Pro ကို ၀ ယ်ရန်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ပြင်ဆင်ပါ
ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်အထိကျွန်ုပ်၏ချက်လက်မှတ်တွင်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ထက်နည်းလျှင်နေသမျှကာလပတ်လုံး iMac Pro ကိုကျွန်ုပ်တို့ယူနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်၏နားကြပ်အသစ်ကိုအသစ်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်ပါကဤဆောင်းပါး၌ 2017 ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြောင်းကိုပြသပါမည်
Artificial Intelligence သည် Photoshop သို့လည်းလာပြီးဓာတ်ပုံများမှနောက်ခံများကိုဖယ်ရှားသည်
အတုထောက်လှမ်းမှုကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ နောက် Photoshop ၏မူကွဲသည်အဓိကအရာဝတ္ထု၏နောက်ခံကိုအလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
NVIDIA TITAN V, 'အစဉ်အမြဲဖန်တီးခဲ့သောအင်အားအကြီးဆုံး PC GPU'
NVIDIA TITAN V သည် NVIDIA Volta ပလက်ဖောင်းကို အခြေခံ၍ စူပါကွန်ပျူတာများကိုအဓိကအာရုံစိုက်ထားသောဂရပ်ဖစ်ကဒ်အသစ်ဖြစ်သည်
Mac အသုံးပြုသူများအတွက် Photoshop အစားထိုး Pixelmator Pro သည်စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိသည်
Pixelmator Pro ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗားရှင်းသည်ထို Photoshop အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်မှန်ကန်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
MacOS High Sierra တွင်အားနည်းချက်တစ်ခုကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား Mac ကိုခွင့်ပြုသည်
Operating system ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်နောက်ဆုံးအားနည်းချက်မှာ macOS High Sierra တွင်တွေ့ပြီး Apple Macs ကိုထိခိုက်သည်။
Windows 10 မှာ antivirus တစ်ခုလိုအပ်ပါသလား။ သင်၏ကွန်ပျူတာကိုကာကွယ်ရန်လိုသည်ကိုရှာဖွေပြီး malware (သို့) အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်ဒီအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါ။
Apple ၏ iMac Pro သည် Siri ကိုအသုံးပြုရန် A10 Fusion processor ကိုအသုံးပြုသည်
Apple ၏လက်ထောက် Siri သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်အောင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
တစ်မိနစ်အတွင်းကွန်ပျူတာကို hack ရန်ဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာသာလိုသည်
ရပ်ကွက်မှလူသိများသောကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာဟက်ကာ Samy Kamkar ကကွန်ပျူတာတစ်မိနစ်မပြည့်ခင်မည်သို့ hack ရမည်ကိုပြသည်။
Near Share သည် Windows 10 ၏ AirDrop ဖြစ်သည်
လက်ရှိ Insider ပရိုဂရမ်တွင်ရှိနေသော Windows 10 ၏နောက်ဆုံးတည်ဆောက်မှုသည် Near Share ဟုခေါ်သောဖိုင်ဝေမျှခြင်းအသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားသည်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Kinect ကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်
စတင်မိတ်ဆက်ပြီး ၇ နှစ်အကြာတွင် Microsoft သည် Kinect အားထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်သွားမည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စတင်မိတ်ဆက်ချိန် မှစ၍ ဈေးကွက်တွင်အောင်မြင်မှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။
AOC သည်ဘတ်ဂျက်အားလုံးအတွက် ၃၁.၅ လက်မမော်နီတာကိုတင်ပြသည်
AOC မှ ၃၁.၅ လက်မနှင့် QHD resolution တင်ပြသောမော်နီတာသစ်သည်ပရိသတ်အားလုံးအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာပါသည်။
KRACK သည် WPA2 Wifi ကွန်ယက်များ၏လုံခြုံရေးကိုအန္တရာယ်ရှိသည်
KRACK application သည် WPA2 protocol တွင်မသိသောအားနည်းချက်ကိုအသုံးချပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုနေတဲ့ connection များအားလုံးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်
မော်နီတာဈေးကွက်သည်တစ်ဟုန်ထိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ Phillips နှင့် AOC သည်၎င်းတို့၏စားသုံးသူအားလုံး၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီနေထိုင်ခြင်း၏ထင်ရှားသောဥပမာဖြစ်သည်။
1 Microsoft Edge အတွက်စကားလုံး extension ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
ကြေငြာပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာ Microsoft Edge အတွက် 1Password extension ကိုယခု download လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Western Digital သည်သိုလှောင်မှု ၁၄ TB ရှိသော hard drive ကိုရောင်းချသည်
Western Digital သည် 14TB သိုလှောင်မှုဖြင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး hard drive ကိုဖြန့်ချိလိုက်သည်။
MacOS High Sierra ကိုယခု download ရယူနိုင်သည်
နောက်ဆုံးပေါ် macOS version ကိုယခု Mac App Store မှတဆင့်အခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်
Ryzen52500U ချစ်ပ်သည် Intel ပရိုဆက်ဆာများထက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်
နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုများအရလာမည့် laptop များအတွက် AMD Ryzen52500U ပရိုဆက်ဆာသည် Intel Core i5-7200U သို့မဟုတ် Core i7-7500U ထက်သာလွန်နိုင်သည်။
GTX 1080 Mini ဂရပ်ဖစ်၊ ဂန္ထဝင်၏ညီမလေးဖြစ်သည်
သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားက graphics စွမ်းအင်ကိုအရှုံးမပေးပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ GeForce GTX 1080 Mini ITX ကို NVIDIA အဖွဲ့ကတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။
Philips မှာ 8k resolution ရှိတဲ့မော်နီတာတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်
ဒတ်ခ်ျကုမ္ပဏီ Philips က၎င်း၏ပထမ ဦး ဆုံးမော်နီတာကို 8k resolution ဖြင့်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လာမည့်နှစ်အထိစျေးကွက်အတွင်းသို့ရောက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
ဒီနည်းပညာကစက္ကန့် ၆၀ အတွင်းကင်ဆာဆဲ (လ်) တွေကိုသတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်
Logitech Craft သည် Microsoft Surface Dial မှုတ်သွင်းသောကီးဘုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်
Logitech ကုမ္ပဏီသည် Logitech Craft ဟူသောစာကိုပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သောပုံများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာတည်းဖြတ်နိုင်သည်။
Alienware သည် G-Sync နည်းပညာဖြင့် ၃၄ လက်မကွေးကောက်မော်နီတာနှစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ IFA မှာ Alienware က ၃၄ လက်မကွေးကောက်မော်နီတာနှစ်ခုကိုတင်ဆက်လိုက်တာပါ
Acer Predator x35 သည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးကိုရှာဖွေနေသူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးမော်နီတာဖြစ်သည်
Acer သည်အကောင်းဆုံးကဏ္ of တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကဏ္sectorအတွက်အများဆုံးလောင်းကစားသည့်ကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Acer Aspire S24, All-in-One၊ ဘောင်မရှိဘဲမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်
Acer သည် IFA 2017 တွင်၎င်း၏အသစ်အဆန်းများကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြသခဲ့ပြီးယခုအကြိမ်သည် Acer Aspire S24 အသစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေသည်။
အာကာသထဲတွင်အသုံးပြုရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောရှေ့ပြေးပုံစံ RAD5545 ကွန်ပျူတာအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောမည့်နေရာ။
Toshiba DynaEdge, သင့်အိတ်ကပ်ထဲ ၀ င်ပြီးဘက်ထရီပါသည့် PC ဖြစ်သည်
Toshiba ကအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အိတ်ဆောင် PC ကိုပြသခဲ့သည်။ Toshiba DynaEdge သည် Windows 10 Pro နှင့် Intel Unite ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်
ဒါကပထမ ၈ ကြိမ်မြောက် Intel Core ပရိုဆက်ဆာများဖြစ်သည်
Intel သည်ပထမ ၈ ကြိမ်မြောက် Intel Core ပရိုဆက်ဆာများကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤပထမမော်ဒယ်များသည် ultrabook နှင့် convertible laptops များကိုအဓိကထားသည်
Western Digital သည် 20TB Storage System ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
20TB သိုလှောင်မှုသည်ထင်ရှားသောသေးငယ်သည့်ခြေရာတစ်ခု ဖြစ်၍ အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းနှင့်အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်ပြင်ပသိုလှောင်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။
Google သည် ၄ ​​င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကိုလျင်မြန်စွာတိုင်းတာရန်ခွင့်ပြုသည်။
Samsung SSD T5၊ သိုလှောင်မှုပမာဏ ၂ TB အထိရှိနိုင်သောရယ်စရာကောင်းသောအရွယ်အစား
Samsung သည်2TB အထိစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့်အသေးငယ်ဆုံး SSD drives များကိုဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိသည်။ ဒါက Samsung SSD T5 ပါ
ဒီအန်အေမော်လီကျူးကိုသုံးပြီးကွန်ပျူတာကို hack နိုင်ပြီ
၀ ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် DNA မော်လီကျူးတစ်ခုအရကွန်ပျူတာကို hack နိုင်ခဲ့သည်။
Intel Core X - Intel ပရိုဆက်ဆာမိသားစုအသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Intel Core-X သည်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မကြာမီတွင်တင်ပြမည့်ပရိုဆက်ဆာအသစ်များဖြစ်သည်။ သို့သော်အားလုံးမော်ဒယ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြီးသားလူသိများကြသည်
Toshiba သည် TBD နေရာ ၃၀ အထိ SSD drives များကိုလွှတ်တင်ခဲ့သည်
Toshiba သည် TB အတွက်သိုလှောင်မှုပမာဏ ၃၀ အထိသိုလှောင်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီအတွက် SSD ဖြေရှင်းချက်များကိုတင်ပြခဲ့သည်
Kitsune သည် Newskill ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားကွင်းအသစ်ဖြစ်သည်
Newskill ကုမ္ပဏီသည် Kitsune ဟုခေါ်သည့်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ် ၁၄၉.၉၅ ဖြင့်ကုလားထိုင်အသစ်တစ်ခုကိုတင်လိုက်သည်။
Windows 10 သည်ဆက်လက်တိုးတက်နေပြီး Windows7နှင့်ပိုမိုနီးကပ်သည်
ပြီးခဲ့သည့်လက Windows 10 ၏ဈေးကွက်ဝေစုသည်ရှယ်ယာအချို့ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်
AMD ကစီမံချက် ၄၇၊ စွမ်းဆောင်ရည် 47 PETFLOP ပါသည့်စူပါကွန်ပျူတာဖြစ်သည်
SIGGRAPH 2017 အခမ်းအနားတွင် AMD သည်စီမံကိန်း 47 စွမ်းဆောင်ရည် peta PETFLOP ၏စူပါကွန်ပျူတာဖြစ်သည့် Project 1 ၏တင်ပြချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။
Aura သည် Newskill သည်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ကီးဘုတ်အသစ်ဖြစ်သည်
Newskill မှယောက်ျားများသည်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာအမြောက်အများပါရှိသောတောင်းဆိုမှုများအများဆုံးကစားသမားများအတွက် Aura ဟုခေါ်သည့်ကီးဘုတ်အသစ်ကိုလွှတ်လိုက်သည်။
USB 3.2 သည် 20 Gbps အမြန်နှုန်းဖြင့် data transfer လုပ်နိုင်သည်
USB 3.0 Promoter Group သည် data လွှဲပြောင်းခြင်းကို 3.2 Gbps ဖြင့်ခွင့်ပြုမည့် USB 20 standard အသစ်ကိုလွှတ်တင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Internal Hard Drive ကိုပြင်ပသို့ပြောင်းပါ
Internal Hard Drive တစ်ခုကိုပြင်ပတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များနှင့်ပြုလုပ်နိုင်သောအလွန်ရိုးရှင်းပြီးစျေးပေါသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်သိပါသလား။
ဤရွေ့ကားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့် Windows 10 ၏နောက်ထပ် update ကိုမှာပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်
Microsoft သည်၎င်း၏ဘလော့ဂ်မှတစ်ဆင့်လာမည့် Windows ၏နောက်ဆက်တွဲဗားရှင်းတွင်မရှိတော့မည့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် application များဖြစ်လိမ့်မည်
Rice University မှသုတေသီများသည်မျက်မမြင်များကိုပြန်လည်မြင်တွေ့စေမည့်ချစ်ပ်တစ်ခုကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ဒီသေးငယ်သောချစ်ပ်ကြောင့် Raspberry Pi တွင်သင့်ကိုယ်ပိုင်အာရုံကြောကွန်ယက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်
ဒီ ReRAM ချစ်ပ်အသစ်သည်ဒေတာများကိုသိုလှောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်
MIT မှကျွန်ုပ်တို့သည် 3D ဗိသုကာများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်အသစ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့အား ReRAM ချစ်ပ်အသစ်များထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Viking သည် ၅၀ TB SSD hard drive ကိုစတင်ခဲ့သည်
Viking Technologies ကုမ္ပဏီသည်ကုမ္ပဏီ၏ကဏ္forအတွက်သိုလှောင်ရန်အတွက် TB ၅၀ သိုလှောင်မှုနှင့် DVD ပေါင်းတစ်သောင်းကျော်အတွက်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းနိုင်သော SSD disk တစ်ခုကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်။
သင် Word နှင့် Online ကိုအခမဲ့အသုံးပြုလိုပါသလား။ စာရွက်စာတမ်းများကိုတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့အွန်လိုင်းပရိုဂရမ်များရွေးချယ်ခြင်းကိုလက်လွတ်မသွားပါစေနှင့်။
Hard Drive ကိုမိတ္တူကူးရန်ဂူဂဲလ်သည်လျှောက်လွှာတစ်ခုတင်သည်
မည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားကိုမဆို Google Drive တွင်သိမ်းဆည်းရန်ဂူဂဲလ်သည်လျှောက်လွှာအသစ်တစ်ခုကိုတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Wifi စစ်ဆေးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Wifi ဆက်သွယ်မှုသည်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်လုံခြုံမှုရှိမရှိသိရန်ခွင့်ပြုသည်။ WiFi key ကို decrypt လုပ်လို့ရမလား။ ရှာတွေ့သည်!